Top Ego Forex ka ahia na 2019 - Ego kachasị mma na trading Forex
Top Ego Forex ka ahia na 2019 - Nke kachasị ego ego
Ụdị njirimara nke trading USD / USD
Ike abụọ kachasị ike n'ụwa dị iche iche bụ European Union na United States of America. Dollar, nke a na-akpọ Greenback, bụ ego kachasị ere ahịa nke ụwa na nke a na-ejikarị eme ya, na-eme ka EUR / USD bụrụ ụzọ kachasị ewu ewu na ahịa.
Ebe ọ bụ na mmiri na-aga n'ihu, ụzọ abụọ ahụ na-enye mgbasa dị ala dị ka nhọrọ mbụ nke ọ bụla na-azụ ahịa na-achọ uru site na itinye ego na ahịa ahịa. A pụrụ itinye mkpebi ndị a mara mma na atụmatụ dịgasị iche iche nke ịzụ ahịa na nke a, n'ihi ụba akụ na ụba na ego na-emetụta nduzi nke ahịa ahịa ya. Ya mere, ọtụtụ ohere na-emeghe iji nweta ego bara ụba na-esite n'ọnọdụ mgbanwe nke agbanwe agbanwe na nke a.
Ntuziaka nke price / USD ahịa trading price na-achịkwa site na ike tụnyere nke abụọ ndị a kacha mkpa akụ. Naanị ịkọwa ya, ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-anọgide na-eme ka akụ na ụba America wee nwee ọganihu ngwa ngwa, ọ ga-eme ka Dollar sikwuo ike megide Euro na-adịghị ike. Nke a bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ahụmahụ Eurozone na-eto eto nke akụ na ụba ya, nke ga-eme ka euro dị ike, ma e jiri ya tụnyere Dollar nke ga-eme ka ọ daa mbà.
Otu n'ime ihe ndị bụ isi n'ime mgbanwe nke ike dị na ya bụ ọkwa nke mmasị. Mgbe ụtụ mmasị nke ego ego America dị ike karịa nke akụnụba ndị dị na Europe, ọ na-akọ maka ego ego US siri ike megide Euro. Ọ bụrụ na ọnụego mmasị na Euro dị ike, Dollar na-adaba adaba. Mgbe ị kwusịrị nke a, naanị ọnụego amamịghe na-adịghị ekwubi mmegharị nke ahịa ahịa ego.
Ọnọdụ nke EUR / USD na-adaba adaba na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Eurozone, n'ihi na ọ bụ nkwenye zuru ebe nile na Eurozone bụ ala nyocha maka usoro akụ na ụba na ego. Mgbanwe dịgasị iche iche nke mgbanwe na ọdịiche dị n'etiti mba ndị gụnyere akaụntụ EU maka Dollar siri ike megide Euro.
Ndị a bụ atụmatụ atụmatụ atụmatụ EUR / USD nke ị ga-achọ ịma tupu etinye ego na ahịa ndị ahịa kachasị ewu ewu na ahịa.
Ụdị njirimara nke trading GBP / USD
GBP nke a na-akpọkwa Cable, British Pound ma ọ bụ ọbụna paịndrị, na-agbachitere ahia n'ogologo ụbọchị. GBP / USD a ma ama dịka ụzọ ahia kachasị njọ ma dị njọ n'ihi na ọ bụghị ihe dị iche ịhụ ụda ụgha na arụmọrụ a na-atụghị anya ya. Inwe mgbanwe na-enweghị atụ na ego ya bụ ihe kachasị mmasị maka ndị ahịa nwere ahụmahụ na ego siri ike maka ndị na-amalite.
Ojiji nke Nyocha Nka na nke akụkọ bụ isi sitere na United Kingdom na US bụ ihe mgbakwasị ụkwụ iji zụgharịa ụzọ abụọ ahụ na-enyere gị aka ịbawanye ohere ị bara uru. Enwere ezigbo ndụmọdụ dị mkpa ị ga-atụle mgbe ịhọrọ trading GBP / USD. Ịmepụta atụmatụ ọma ịzụ ahịa na-adabere n'ichebe onwe gị mgbe nile maka akụkọ banyere akụnụba karịsịa iji chọpụta ma hụ mmepụta akụkọ akụ na ụzụ na-atụghị anya ya nke nwere ike ime ka omume ọjọọ na ahịa ahịa a.
Ụdị njirimara nke azụmahịa USD / JPY
Yen nke ego kachasị ego n'ime akụ na ụba Eshia bụkwa ụdị nnọchiteanya maka ọganihu akụ na ụba nile nke Asia. Mgbe enwere nsogbu na mpaghara Eshia, ndị ahịa na-emeghachi omume site n'ịzụ ma ọ bụ ịzụta yen dịka onye na-agbanwe ego ego ndị ọzọ nke mba Asia nke na-adịghị mfe ịzụ ahịa. O kwesịkwara ịkọwapụta na akụ na ụba nke Japan edepụtara oge ndekọ ego nke akụ na ụba dị ala na obere ọnụ ọnụ. Mgbe ị na-azụ ahịa USD / JPY, ihe na-egosi isi nke nduzi ya n'ọdịnihu bụ akụ na ụba Japan nke anyị ga-etinye uche na ya.
Ọtụtụ okirikiri a na-ahụ anya na-ahụ ọrụ Yen na-emetụ aka na ahia. Ebe ọ bụ na iwu nke ọnụ ọgụgụ dị oke ala nke Japan nwere maka ọtụtụ n'ime 1990s na 2000, ndị ahịa zụrụ ego ndị Japan na obere ego wee jiri ya tinye ego na ego ndị ọzọ. Nke a na-enweta uru site na ọnụọgụ dị iche.
Ya mere, na gburugburu ụwa, ntinye ego nke Yen mgbe nile gosipụtara na ọ bụ ọrụ siri ike. N'agbanyeghị nke a, ndị ahịa Yen nwere otu ihe dị mkpa dịka ego ọ bụla ọzọ.
Kiet ke otu mme utịp emi ẹkụtde ke akpanikọ ke utom ukpepn̄kpọ Japan edi Ntiense US. Omume a nke a na-ejighị n'aka bụ ihe mere ndị ahia ji eji nyocha nke ụzụ iji ghọta ụdị nke ụzọ a, na ogologo oge anya. Ọdịiche ị na-ahụ mgbe niile nwere ike ịdị iche site na 30 ma ọ bụ 40 pips dị ka 150 pips.